Eyona Okuchukumisayo Castles e Germany | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Eyona Okuchukumisayo Castles e Germany
EJamani ngokwendalo ilizwe elihle. Kodwa xa icinga iinqaba, uya umthande nangakumbi. Kwaye yonke loo nto ngenxa eJamani, ngokuvumelana abaninzi, capital enqabeni ukuba umhlaba.
Kukho wonke umkhosi iinqaba emangalisa Germany ufuna ukutyelela. Kweli nqaku, siya kugxininisa kuphela abo amahle kakhulu phakathi kwabo. Kwakhona siza kukunika ulwazi indlela ongenza ngayo ukufikelela kubo ngololiwe, kwi uyakholiswa bonke abathandi kaloliwe!
Schloss Neuschwanstein - Eyona Okuchukumisayo Inqaba e Germany
Abantu abaninzi bayazi ukuba njengenye iinqaba intle kwihlabathi liphela, nje Germany. Ukuba ukuba, ukuba ngokuqinisekileyo idume ngokuba uyasikhuthaza ukuba Disney Castle. Xa uthatha jonga kule amabali entsomi amnandi nqaba, uyaqaphela ukuba kutheni. Uyakwazi Ngokuqinisekileyo ukuqonda isizathu sokuba phakathi zakhe ezinde kakhulu emangalisa Germany!
Schloss Neuschwanstein ngokungathandabuzekiyo uyingangamsha, kodwa ngaba ufika indlela apho? Into emnandi eJamani kukuba kwiindawo ezininzi xhuma nge loliwe. Lo loliwe sesikhululo esikufutshane enqabeni ikuye Fussen. kunjalo, uyakwazi ukufikelela ukuba isikhululo evela eMunich okanye nayiphi na eminye imizi emikhulu German.
Ulm ku Fussen Uqeqesha
Munich ku Fussen Uqeqesha
Stuttgart ku Fussen Uqeqesha
Nuremberg ku Fussen Uqeqesha
Hohenzollern - Eyona Imilingo Inqaba e Germany
inqaba Hohenzollern ayikho kuphela phakathi zakhe ezinde kakhulu emangalisa eJamani - ukuba kakhulu omlingo Nye. Uyakwazi kuyifumana phondo Baden-Württemberg, kufuphi Stuttgart. kwiphondo Baden-Württemberg yeyona kakhulu underrated enye e Germany, kodwa xa ubona le nqaba, wena sisingise ukutshintsha uluvo lwakho!
kunjalo, siya enqabeni yomkhosi unokuba yingxaki, nakuba ezixabisa ngokupheleleyo oko. Eyona ndlela ilungileyo ukuthatha uloliwe ukusuka Stuttgart ukuya Hechingen. Ngoko ke kufuneka ukuba uthathe uhambo olude kwaye igquma engumnqantsa ukufikelela enqabeni. I ukudlala! Unako ukuthatha kweshatile ibhasi okanye itekisi esuka Hechingen le nqaba lisondele kakhulu edolophini.
Hohenzollern Sigmaringen - sizokuba Inqaba e Germany
Ngokubona kwethu, akukho uluhlu zakhe ezinde kakhulu emangalisa Germany kunokuba ngokupheleleyo imshiye Hohenzollern Sigmaringen. Yeyona inqaba kakhulu olubanzi sezihlandlo uya kuze ubeke amehlo akho ku! Kwaye ukuba oko akwanelanga, nto eyidla omangalisayo.
Hohenzollern-Sigmaringen ke e Baden-Württemberg; ngoko ke zosuku ngokupheleleyo kutheni abantu dzunisaka eli phondo njengoko kunazo e Germany!
Njengoko abajikelezayo - ukusukela unako ukufumana inqaba kwidolophu, oko ukufikelela ngokulula ngololiwe. Eyona ndlela ilungileyo ukuthatha uloliwe ukusuka Ulm okanye Stuttgart uze uhambe enqabeni yomkhosi.
Frankfurt ku Ulm Uqeqesha
Stuttgart ku Ulm Uqeqesha
Leipzig ku Ulm Uqeqesha
Nuremberg ku Ulm Uqeqesha
Le nqaba imi yodwa phezu kwentaba encinane, yaye kubonakala ngokwenene emangalisa. kunjalo, akukho lililolo wakube uthathe ingqalelo yokuba kusenjalo ke kuhlala! Ewe, i Eltz usapho iye yabamba enqabeni for 33 ezizukulwaneni!
Xa kuziwa ekubeni apho, kuya kufuneka ukuhamba okanye ukufumana ibhasi okanye itekisi evela Hatzenport. kunjalo, ke kunokwenzeka ngokupheleleyo ukuya kwidolophu encinane ngololiwe Koblenz - isixeko esikhulu elikufutshane.
Frankfurt ukuba Hatzenport Uqeqesha
Bonn ku Hatzenport Uqeqesha
Cologne ku Hatzenport Uqeqesha
Dusseldorf ku Hatzenport Uqeqesha
Ngoko khona unayo kuyo, uluhlu olupheleleyo zakhe ezinde kakhulu emangalisa Germany. Sinethemba lokuba uza kutyelela ubuncinane omnye kwabo uhambo lwakho elandelayo! Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga ehamba ngololiwe ukuya kula iinqaba, uzive ukhululekile ukuba Qhagamshelana nathi nangaliphi ixesha.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Jemani Iinqaba europetravel trainjourney Tranride tips uloliwe Travel travelgermany